Ohatrinona ny fampiatoana an'i Fox? - Valiny Tsara Indrindra
Tena > Valiny Tsara Indrindra > Foxracingshox com - fanontaniana mahazatra
Foxracingshox com - fanontaniana mahazatra
Ohatrinona ny fampiatoana an'i Fox?
Salama ry tary. (Ranomaso Bat) Handeha homerun aho anio ary hilaza aminareo ny momba ny mpihinana hatairana ao amin'ity fizarana Sh * t I Never Knewew ity. Ny anaran'ity fizarana ity dia ny The Shocking Truth.
Ary ity dia momba, fantatrao izany, mpitroka Shock. Fantatra koa amin'ny hoe dampers. Misy karazany telo lehibe ny mpitroka hatairana.
Ary rehefa miresaka kitapo fampiakarana ny vatana dia matetika ianao no manana safidy hisafidy mpitroka hatairana hafa. Ary ny voalohany izay entin'ny ankizy maro, ny mpitroka hidrôma na hidroka, ary ireo no mpitroka shock, ambany, mora vidy kokoa. Ary izany no mahatonga azy ireo matetika tafiditra ao anaty kit tsotra.
Voalohany indrindra, ny fomba fiasan'ny mpitroka manaitra iray, manana fantsona eto ianao, na varingarina, ary misy valizy ao anatiny ny solika, solika, hydraulic, avy aiza ny Hydro, ny anarana. Ary amin'ny ankapobeny dia misy piston mifatotra amin'io tsorakazo io ary rehefa midina ilay piston na rehefa midina ilay tehina dia manosika ilay piston hamakivaky io tsiranoka hydraulic io ary amin'ny ankapobeny dia mahazo ny tohodranao sy ny fomba itondran'ny mpitroka hatairana azy ireo. fomba hanaovana izany, fa amin'ny ankapobeny dia misy ifandraisany amin'ny hafaingan'ny hafainganam-pandehan'ny ranona mandalo ilay piston niraikitra tamin'ny tehinao eto, sns, ary raha manana valves isika, misy koa valves ao amin'ilay shock absorbery izay mandingana ny tsiranoka sy ny rehetra izany zavatra izany. Ka, toy ny nolazaiko, dia misy mpitroka manaitra hydraulic izay ho tahaka ity iray ity.
Nanaitra ny BDS taloha izay nesorinay avy tao amin'ny fanariam-pako io, fa ohatra fotsiny io. Izy io dia mety ho mpitroka lozam-pifamoivoizana, ary satria matetika dia azonao atao ny milaza avy hatrany fa mpitroka fikorontanana hydraulic, azonao atao ny manitatra na mamehy azy. Azonao atao ny mamehy azy ary tsy hipoitra intsony izy io.
Ireo mitsambikina miverina dia hatairana iray nitrogène na nitro-shock izay toa an'io rancho eto io ka rehefa atosikao midina io dia miharihary fa hiverina irery ary noho ny vesatry ny azota izay ao anaty Shock no misy.
Izy io amin'ny ankapobeny dia entona voatsindry ao anaty mpitroka hatairana izay manery ny piston hiakatra. Ary eo no ahazoanao an'io. Indraindray ny olona dia mieritreritra fa ny mpitroka hatairana dia ratsy satria tsy miverina amin'ireo mpitroka hatairany ilay tsorakazo, saingy tsy voatery ho izany.
Izy ireo dia mety ho mpitroka tafin-doha amin'ny alikaola tsy misy azota ao anatiny. Ny fahasamihafana misy eo amin'izy ireo. Matetika ny mpitroka hatavezina dia manosika mora kokoa.
Fiara antitra sy kamio antitra tamin'ny taona 70 sy 60 dia mpitroka hatairana azota fotsiny tamin'ny hazakaza-tsoavaly ary ny ankamaroan'ny teny an-dàlana dia damper hay avokoa ary ny ankamaroan'ny zava-drehetra dia nisy damper hydraulic tamin'izany fotoana izany, ary izany no nahatonga ny zavatra rehetra hitsinkafona, sahala amin'ny sambo, satria ny haitao mandavantaona dia tsy be pitsiny toy ny ankehitriny ho an'ny fiara isan'andro. Ka ny mandona hydraulic, toy ny nolazaiko, dia miroso amin'ny fandehanana moramora kokoa sy malefaka kokoa, fa ny hany maharatsy ny mpitroka hatavezina dia ny rivotra miditra. Amin'ny ankapobeny, rehefa manomboka mandeha bisikileta ilay mpitroka manaitra, ny tsiranoka ao anaty fahatairana dia mivoaka na feno fofona rivotra, ary izany dia mitarika fahaverezan'ny fifehezana tanteraka ny fahamandoana.
Ary avy eo dia lasa tsy dia mandaitra intsony ny dampers ary miova ny tahan'ny fanalefahana, ary avy eo, raha manohy mitondra fiara ianao, dia miakatra koa ny tsiranoka. Somary elanelam-potoana mihena izy io. Fantatrao ve raha miverimberina ny freins-nao ary manafana azy ireo dia mihalefy? Imbetsaka ny hafanana no hafanaina sy hidiran'ny rivotra ary ho very ny fananana «cushion» izay natombok'ireo mpitroka hatairana.
Izany no antony nivoahan'izy ireo tamina fikorontanana azota, ary teo no nidiran'ny fikorontanana azota. Mety tsara raha azonao atao - tsy afaka mampiseho ohatra iray aho satria mila tapaka ianao, fa amin'ny ankapobeny dia manana ny efitranonao hidinao ianao ny menaka ao anatiny, ary avy eo amin'ny ilany iray hafa dia manana efitrano misy azota ianao izay manindry Ary satria iharan'ny tsindry io dia tsy avelany hidina ny ranon-drivotra. Na manao ahoana na manao ahoana ny fanerenao ny tsingerinao, ny fampiatoana anao, tsy mihetsika ny tsiranoka ary noho izany dia mitazona ny toetrany malemy toa ny tamin'ny nanombohany na dia mangatsiaka aza - noho izany ny teboka mpitroka azota azota izay hita amin'ny ankamaroan'ny , ny ankamaroan'ny fiara maoderina ankehitriny dia hanana mpitroka hatairana azota fotsiny satria miasa tsara lavitra noho ny mpitroka hatavezina hydraulic.
Matetika izy ireo dia mitaingina somary henjana kokoa, fa raha toa ny fihenan-tsasatra na ny tahan'ny lohataona ho setroka azotazy dia milamina ny dia. Matetika ny olona dia mimenomenona amin'ny diany masiaka, ary mazàna satria izy ireo dia nivadika ho gaga azota amin'ny fiara izay niaraka tamina mpitroka hatavezina, ary ireo mpitroka fatratra azota dia afaka mampiakatra kely ny tahan'ny lohataona, ka mamorona fiakarana henjana kokoa rehefa izany no izy. vita misy dikany. Saingy amin'ny tontolon'ny fampisehoana dia ireo mpitroka azotazy ihany no lalana tokana.
Ny vidiny, araka ny nolazaiko ihany, usua lly miaraka amina kitapo fiakarana, rehefa manainga kitapo dia ny mpitroka tohina ifotony matetika no mpitroka hatairana satria izy no mora indrindra vokarina. Ny dingana manaraka dia mazàna dia mpitroka shock tampoka azota, izay nolazaiko fa tsara kokoa satria tsy manjavona toa io nolazaiko io na mampidina ny tsiranoka, izay mitazona ireo toetra mampandoavina tsy tapaka. Ka somary lafo kokoa izy ireo satria mazava ho azy fa lafo kokoa ny manamboatra azy ireo, satria misy tsiranoka hydraulic ary misy fiampangana azotazy, fiampangana gazy ao anaty mpitroka hatairana.
Ka dia ho lafo kokoa izy ireo. Matetika ny dingana manaraka. Ary avy eo taorian'izany
Matetika io foto-kevitra io ihany. Ny mpitroka azotaona azota dia ho toy ny kitapo coilover ananantsika eto araka ny ahitanao izao. Ity dia ho kitana coilover Fox.
Ary ny kitapo coilover, raha tsy fantatry ny sasany aminareo, ny kitapo coilover dia mpitroka manaitra tampoka na damper misy lohataona coil manodidina azy. Fitaovana mahaleo tena izy io. Raha tokony hanana lohataona coil sy mpitroka hatairana dia lohataona iray sy fihoarana mitambatra ho iray monja ary matetika ny fampiatoana ny coilover dia midika fa manana haavo mitaingina na tahan'ny lohataona azo ovaina.
Azonao atao koa ny manamboatra ny tahan'ny lohataona na ny haavon'ny dia, tahaka ireo coilovers Fox ireo. Ary ity iray ity, araka ny hitanao, dia manana fitehirizan-drano lehibe eto, izay antsoina hoe reservoir, ary io dia reservoir ivelany, ary izany ny reservoir ivelany, izay efitrano fanampiny ahafahana na mampitombo ny fahafaha-manafaka ny mpitroka manaitra. toy ny ankamaroan'ny zavatra, tsy tsara ary mitovy amin'ny mpitroka hatairana.
Ny hafanana dia hiteraka olana maro na hahatonga anao ho very ny fanananao «cushion» mpanala taitra tampoka tahaka ireny nolazaiko ireny. Ary izany dia zavatra ho hitanao toy ny fiara mihazakazaka na kamio. Betsaka amin'izy ireo no manana mpitroka manaitra avy any ivelany satria entin'ny be loatra ka mamela anao hanaparitaka tsara kokoa ny hafanana ary hampandeha tsara ny hatairana.
Ka io no izy. Ary ity iray ity koa dia manana damper azota amin'ny Fox 2.0 mahazatra ho an'ny fametahana fanampiny.
Izay damper safidinao dia miankina amin'izay tadiavinao. Na mitady fampiononana ianao na fampisehoana. Tsy maintsy manapa-kevitra an'izany ianao ary manampy anao hisafidy ilay damper tadiavinao.
Ny faharetana sy ny faharetan'ny damper dia tsy voatery hifandraisany amin'ny fomban'ny damper, fa ambonin'izany rehetra izany dia ny namboarin'ilay shock absorber dia namboarina ho azy sy ireo fitaovana ampiasaina. Azonao atao ny manana mpitroka haona feno gazy feno nitroka izay ho levona na ho simba ao anatin'ny herintaona, ary mety hanana mpitroka haitao hydraulic mora vidy izay haharitra dimy taona Ny fitaovana sy ny fanamboarana ny absorber shock dia hanampy ny faharetany. Araka ny nolazaiko, ny mpitroka tafintrano hidraulika dia mora kokoa amin'ny fandehanana mahazo aina.
Raha manantena fahombiazana avy amin'ireo mpitroka hatairana ianao, dia mety tsy tokony hampiasa mpitroka lozam-pifamoivoizana toa ny nolazaiko ho an'ny coilovers, dia avy amin'ny fampiharana hazakaza-tsoavaly izy ireo. Ary natao ho an'ny fampisehoana tanteraka izy ireo. Raha ny damper feno azota toa an'ity dia mety tsara amin'ny zavatra rehetra eo anelanelan'ny mpitaingina anao isan'andro.
Fa maninona no havaozina? Ny iray amin'ireo antony lehibe hanatsarana ny mpitroka hataonao dia mety ho antony lehibe indrindra amin'ny kalitaon'ny mitaingina. Ary noho izany indraindray dia hitaraina ny olona fa ny kamio - (burps) (mihomehy ny ekipazy) dia mandeha mafy be na malalaka be, ary matetika izany dia mifandray mivantana amin'ireo mpandeha kamio. Ka ny mpitroka hatairana dia misy fiatraikany lehibe amin'ny fikirakirana sy ny fahombiazan'ny kamio, noho izany dia manoro hevitra ny olona aho mba angamba handany vola kely fanampiny ary hanatsara ireo mpitsoka hataonao satria hahazo tombony tokoa ianao amin'ny ho avy, afaka mamonjy vola vitsivitsy ianao amin'ny voalohany ary fantatrao fa tsara izany.
Raha mandeha miaraka amin'ireo fikorontanana mora vidy ianao ary avy eo te-hanatsara amin'ny fotoana iray, dia tsara izany. Mety hanao an'izany aho, kalitao tsara fitondran-tena tsara. Ary zavatra iray hafa azontsika be dia be ny fomba fampitaovana ireo mpitroka manaitra.
Ary tena miankina amin'ny mpanamboatra izany, satria efa hitako ny roa tonta. Ity dia mpandoto an'i Rancho izay matetika miakatra amin'ny vatana, ary toy izao no nahatongavan'izy rehetra tao anaty kamio. Na dia toy izany aza ny damper aftermarket, tsara izany Bilstein izany, saingy mpandala ny ozinina Toyota izany, ary matetika miankina amin'ny karazana olana any amin'ny efitrano fandraisam-bahiny misy anao sy izay tsy misy izany, fa izahay kosa mametraka azy ireo matetika, saingy araky ny nolazaiko dia izany rehetra izany miankina amin'ny mpanamboatra.
Ary mazàna rehefa taitra ianao, dia milaza aminao ny fomba fametrahana azy, ny vatanao na ny vatanao ny torolàlana. Fa eny, matetika dia mahazo izany ihany koa isika, amin'ny alàlan'ny alàlan'ny mpantsaka manaitra ahy, ary miankina amin'ny mpanamboatra mpitroka hatairana izany matetika. Saingy araka ny nolazaiko, ny mpitroka Fox shock dia afaka mandeha amin'ny lalana roa.
fifanarahana bisikileta zoma mainty
Tsara izany, ka nandinika ny fototr'ireo mpitroka hatairana aho satria ity dia adihevitra iray izay mety hitohy mandrakizay ary maro ny fitambarana ary maro ny safidy. Saingy te-hiresaka fotsiny ireo mpitroka hatairana telo lehibe hitanao aho rehefa mividy kitapo fiakarana na farafaharatsiny amin'ny kamio amin'ny ankapobeny. Ny tiako holazaina dia hoe, raha mbola misy fanontaniana hafa tianao na te hahalala zavatra hafa, dia mifandraisa aminay ary ampahafantaro anay izay hevitrao ary inona izao no nosoniavinako satria mila miasa indray aho ary mila manafatra pizza, ka izahay mahita anao any aoriana - afaka mahita ny tongotrao ianao. (mihomehy ny ekipa) (mozika rock)
Azo atao ve ny manafintohina an'i Fox?
amboahaolo36 FactoryFampiatoanaFork - 27.5 ', 160 mm, 15QR x 110 mm, 44 mm Offset, Shiny Black, Grip 2. $ 1,139.00.amboahaolo36 FactoryFampiatoanaFork - 29 ', 160 mm, 15QR x 110 mm, 44 mm Offset, Shiny Black, Grip 2. $ 1,139.00.
Matetika izahay no milaza aminao eto amin'ny GMBN Techhow mba hikarakara ny bisikiletanao, ary ny ankamaroan'ny zava-drehetra dia manadino ny boaty izahay satria izany no zavatra tsy maintsy zakan'ny fampiasanao isan'andro. Ny forks fampiatoana anao dia hisy fotoana sarotra ihany koa, na izany aza, ary nizara toro-hevitra vitsivitsy taminao izahay ny amin'ny fomba hanaovana izany, fa ny fahatairana amin'ny ankapobeny dia zavatra maharitra. Aza avela hampiala anao izao.
Ho asehonay aminao ny fomba fanaovana rivotra tena tsotra afaka Maintenance amin'ny mpitroka rivotra tampoka. Tsy mila faritra manokana na fitaovana manokana ianao. Tsotra be izy io, ary hahatsapa ho malefaka kokoa ny fahatairana anao ary hiasa ho tohina tsara kokoa, ka tsy maninona na fikororohana Rocks na FOX na DVO na hafa.
Io fitsipika io ihany. Esorinao ny tananao, diovinao, averinao. Azonao atao ny mahita ny vovoka manaitra manodidina ny gasket eto, ratsy endrika izy io ka mila TLC kely hanondroana izany.
Ny bisikileta sasany dia manana hidy mandeha amin'ny tariby toy ity. Raha manao an'io ianao dia mety te hanolo ny tariby amin'ny fotoana itrangan'ny crimped eo. Ny hany mila atao dia ny mihazakazaka tariby any ary esory ilay mando, tsara sy mora, tena asehoko anao ny Rockshox damper izay misy fametahana vaovao amin'ny farany ka somary tsy mitovy amin'ilay iray io.
Tsotra be ireo. Esorinao ny visy. Esory fotsiny ny tampon'akanjo eny an-tampon'ilay damper, ary avy eo azonao sintonina ny vatana.
Saingy somary tsy mitovy kely izy ireo amin'ireo dampers Rockshox vaovao. Ka mila fitaovana maromaro ianao hanatanterahana an'io asa io. Zavatra tsotra fotsiny io, na eo aza ny hevitrao rehefa mijery ity vahoaka ity ianao.
Voalohany, mila karazana lamba famaohana, lamba famaohana, zavatra tsy misy lintona ianao amin'ny ankapobeny mba tsy hanelingelina ny zavatra hafa rehetra. Ny manaraka dia vise. Hamarino tsara fa manana valanorano malefaka ianao satria tsy te hanimba ny faran'ny hatairanao, fa tsy tena ilaina izany, azonao atao io asa io raha tsy misy azy io, tiako ny mampiasa tadin-tady satria mora kokoa ny manaisotra ny hatairana mpitroka, indrindra raha misy menaka sy malama ilay izy satria mety hanery be azy io ary tsy hanimba azy.
Fa afaka manao izany amin'ny tananao efa taloha ianao. Manaraka izany dia te hanana karazana mpanadio etona ianao. Toy izany koa ny alikaola isopropyl, mpanadio frezy dia tsara ho an'izany, toy izany koa ny contact cleaner satria toaka isopropyl tena izy.
Toy ny efa nolazaiko hoe, izay rehetra etona dia tianao ny diovina. Ny fanaovana safidy tsara dia hevitra mety satria azonao atao ny manala ny loto amin'ireo tombo-kase ireo, raha misy izany. Na izany aza, azonao atao ny mampiasa «éiro» tena tsara.
Ka tsy mila manana fitaovana manokana ianao. Izany dia nilaza fa tsy afaka mandresy ny fitaovana mety amin'ilay asa ianao. Ankehitriny dia mila menaka sy menaka mandany manokana ianao.
Eto amin'ny latabatra eto dia misy menaka Wilkins sy Soderstrom isika, manana menaka fanamafisam-peo Rockshox, dibera Rockshox, ary Flo sasany ao amin'ny Fluid avy any FOX. Ny iray amin'ireto zavatra ireto dia ho tsara amin'ny asa. Mila threadlocker vitsivitsy ianao rehefa averinao amin'ny bisikiletinao ilay damper satria ny bolam-bolo dia manana fahazarana mamaha raha mifanaraka amin'ny fanamboaranao manokana.
Matetika dia dimy milimetatra izy io, fa amin'ny tranga sasany dia mety ho enina izy io. Ary miaraka amin'io fanamainana Rockshox manokana io, tena mila kely ianao raha ny marina. Isaky ny miasa amin'ny «damper» ianao dia mila manala ny tsindry avy aminy ary averina averina indray.
Ny solomaso fiarovana dia hevitra tsara rehefa miasa miaraka amin'ny menaka, mety ho frein, fork, mpitroka hatairana, sns. Azonao atao ny mampihena ny fahafahan'ny zavatra misavoana amin'ny alàlan'ny fanesorana voajanahary ny tabilao manaitra mandritra ny bisikileta, toa hasehoko anao ianao afaka mandositra tsy mampiasa vise. Fa raha miasa amin'ny birao ianao, dia tsara foana ny manana solomaso.
Ny fonon-tanana vita amin'ny fingotra dia hevitra tsara hiarovana ny hoditrao ary. Amin'ity tranga ity, ny menaka dia tsy manimba toy izany, fa midika izany fa manana fihazonana bebe kokoa ianao ary mazava ho azy fa tsy hiditra amin'ny hoditrao akory. Ary farany fa tsy ny kely indrindra dia metaly tsara tarehy vita amin'ny metaly GMBN, ka raha esorinao ny mpitroka hatairana ao anaty birao, dia izao no fotoana hanesorana ireo bolts ireo.
Na izany aza, hasehoko anao ny fomba iray hafa izay tsy mila manana vise ianao. Tena ilaina izany raha tsy manana faritra voatokana hiasa amin'ny bisikiletanao ianao. Azonao atao ihany koa ny manao izany amin'ny bisikileta amin'ny tany, avy eo am-piasana, fa mety mila namana iray mitazona ny lasely fotsiny ianao mba tsy hianjera ilay bisikileta rehefa manao izany ianao.
Ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny manala ny fonon-tsofina rivotra kely. Ary te-hanoratra ny tsindry ataonao ianao fa mihazakazaka ao amin'ilay mpitroka hatairana anao satria fotsiny hoe somary nanamora kokoa izany, ary tsy mila mikoropaka ianao manao ilay masonao indray amin'ny lafiny hafa rehefa manangona azy indray ianao. Ka ampidiro ao fotsiny ny paompy hataoko.
Jereo ange ny milina entiko eto. Ary avy eo hihodina tsimoramora aho. Rehefa mamoaka ny tsindry avy amin'ny fahatairana ianao dia aza atao amin'ny famelezana lehibe iray.
Ataovy tsara sy miadana. Tsara ny manao azy amin'ny paompy manaitra. Raha mbola misy rivotra ato amin'ity efitrano ratsy ity dia mety ho sarotra ny manala ny tanany amin'ny rivotra, ary mety hampidi-doza ihany koa izy io.
Tsy hampiasa vazivazy aho amin'izany, tena esoriko ny valopy misy rivotra raha mbola eo amin'ny bisikileta izany, avy eo hesoriko ny tadin-dokotra ary esoriko avy eo amin'ny bisikileta ny erika mba hanadio sy hijerena. Mampiasà fehin-kibo eto aho izao. Mora vidy izy ireo.
Azonao atao ny mahazo azy ireo amin'ny kilao vitsivitsy any Amazon, ary tena mora ampiasaina izy ireo, indrindra ho an'ity asa ity, satria manana toradroa marina izy ireo. Tsy hanimba azy ianao. Ary na dia somary malama aza ianao dia mbola afaka mahazo mividy tsara ihany.
Azonao atao ny manala ny valopy amin'ny tànana mora foana amin'ny tànana, fa mety ho sarotra kely ihany, indrindra fa ny fanaovana piggybacking mba hividianana fividianana tsara manodidina ilay mando. Ka tranga iray fotsiny ny mihazakazaka ny strapback amin'ny alàlan'ity wrench wrench ity. Ary, toy ny ankamaroan'ny zavatra, dia levona mifanohitra amin'ny famantaran'ora io.
Lasa izao. Raha manao izany amin'ny vice ianao izao dia aza gaga raha mihodina koa ny tapany ambany amin'ny fantsona. Tsy olana io.
Ary mety hisy triatra kely raha ny rivotra ihany no afaka rehefa tonga any amin'ny faran'ny kofehy ianao. Andao. Mahafinaritra sy mora.
Tsy mora ny manaisotra ny damper anao, ampiasao lakile Allen tena tsara kalitao. Hamarino tsara fa mifanaraka tsara ao anatin'ireny volo mandomando ireny ka alao antoka fa mipetraka tsara ny valizy hex satria raha manana fihazonana visy betsaka ianao dia mila mandresy an'io hery io aloha. Ary raha tsy miditra izy ary milatsaka, dia hanimba ny lohan'ny visy ianao ary tsy zavatra tsara izany satria mety ho sarotra be ny manala ilay visy aoriana ao, hianjera ny vodisambo, ary ao ity tranga ity, ny famolavolana ny bisikileta, ny rocker dia hikasika ny frame ary tsy tiako ho simba izany no antony nanesorako ny kodiarana.
Ka tena mitazona ny vodin'ilay bisikileta fotsiny aho mba hahafahako manala azy tsy milatsaka. Tahaka ny ahitanao ny hamelako ity sombin-damosina ity hiverina amin'ny fantsom-batana tsy misy fahasimbana ary ahodinkodina fotsiny ny damper ankehitriny, toy ny mpitroka hatairana rehetra, dia hanana karazana fanamboarana samihafa izy ireo saingy ity iray ity dia iray miaraka amina tendrombohitra misy azy. ireo takelaka kely ireo Ambony ny fivarotana azy ireo amin'ny toerana azo antoka satria mora esorina sy very izy ireo. Ankehitriny rehefa navotsotra ny faran'ny lamosin'ny damper, te-hihazona ilay vatana mandavanta ihany aho rehefa manafaka ny sisiny eo aloha ihany koa ianao.
Eny ary izao fotoana tokony hanesorana ilay visy. Ity iray manokana ity dia manana voanjo babo amin'ny lafiny iray hafa ka tianao ho azo antoka fa tsy hianjera izy ary handeha na aiza na aiza. Ary apetaho fotsiny ilay bolt ary esory ny fahatairana amin'ny bisikileta.
Raha mbola tsy nanao an'io tamin'ny bisikileta ianao ary te-hamaha ny volon-damper amin'ny vise, dia alao antoka fa voaro amin'ny valan'ny valanorano malefaka ny fanambanin'ny damper. na tena mametraka zavatra ao amin'ny lefitra, toy ny hazo, zavatra toa izany. Tsy te-hikikitra aminy ianao ary hanimba azy.
Ankehitriny, alohan'ny tena hanesorako izany dia tiako haseho anao ny fiafaran'ny fahatairana. Hafa kely izao. Ka manana bracket misy anao eto ianao, ary mazava ho azy fa tsy hamela ahy hisisika hatrany io ampahany amin'ilay damper io.
Tena mila esorinao amin'ny bushing damper izay mamakivaky ny farany izany ary manana spacer. Matetika ianao dia afaka manala ireo spacers ireo fotsiny dia manaparitaka azy ireo. Matetika ianao dia tsy mila manala ny socket - esoriko avy any ambony io.
Mampiasa lakile Allen milimetatra telo fotsiny izahay. Izao dia manana ilay volotara telo milimetatra eo amboniny ianao ary mety hidina avy eo an-tampon'ny damper any ary mila fanadiovana izany. Manaraka izany dia mila esorinao eto ny peratra peratra.
Ity no ampiasainao hametrahana ny sag. Ataovy amin'ny toerana azo antoka izany. Raha simba io dia azonao atao ny mandamina azy avy eo.
Ary raha misy antony tsy tianao ireo mena dia izao no fomba tsara handokoana mainty azy ireo. Raha misy mipoitra, dia mety hanimba ny tombo-kase ihany. Koa mitandrema tsara rehefa manao izany.
Ary indraindray azonao atao ny manantena fifandonana rehefa esorinao amin'ny sisiny izy io, fa amin'ity tranga ity dia hivezivezy tsara izy ka apetraho eo amin'ny lamba famaohana fotsiny aho, manaraka an'ity tranga ity no mila ataoko dia ny manala ny lohataona refy. . Atsofohy ity ary apetraho eo amin'ny fotony. Ary tonga izao ny fotoana hanomezana ny vatanao mando sombin-javatra madio sy milamina.
Ankehitriny dia zavatra iray sisa no hodinihina. Azonao jerena eto fa manana spacer volume vitsivitsy ato aho hampitombo ny hatairana any aoriana amin'ny faran'ny dia. Raha tsy manana ianao dia izao no fotoana mety hampifanarahana ny sasany.
Ary raha manana spacer kely fotsiny ianao amin'ny Attamp damper anao dia hevitra tsara ihany koa ny hamakivakiana ity dingana ity ary hanadio azy kely. Izao no fotoana hanadiovana azy io tsara ary avy eo hodinihinay izy ireo mba hahazoana antoka fa milamina tsara ny zava-drehetra. Ireo tombo-kase eo aminao dia tena tsara tokoa, amin'ny ankapobeny, saingy mbola azoko atao ny mamela ny loto sy ny loto ary izany dia hihena tsikelikely.
Io mpitroka hatairana manokana io dia tsy hoe antitra na dia feno vovoka sy maloka ivelany aza izy, tsy hitanao mihitsy izany. Miankina amin'ny toe-javatra itondranao azy io. Ankehitriny, tsara ny hahalalana izay elanelam-potoana tokony hataonao amin'ny serivisinao amin'ny bisikileta, ary i Rockshox, ohatra, dia mamporisika anao hisolo ny tombo-kase eto isaky ny 50 ora mitaingina.
Noho izany dia tombo-kase quadruple misy kirihitra ary mitovy amin'ny volon'ondry tena izy dia serivisy vonjimaika. Fanaraha-maso izany, madio izy io, ary avy eo soraty fotsiny. Noho izany, tsy manolo na inona na inona amin'ity serivisy ity aho, fa handinika fotsiny aho ary hino fa toa tsara amin'ny toe-javatra rehetra ny zava-drehetra.
Mazava ho azy, raha misy famantarana ny fampiasana mazava ho azy dia manana safidy hanafatra ireo faritra fanoloana ireo ianao, na raha tsy azonao antoka ny hiova dia ento any amin'ny fivarotana bisikileta eo an-toerana ianao. Fa dingana mora be io, indrindra rehefa lasa lavitra ianao. Fa hitako eto fa tena manana endrika tena tsara ny tombo-kase quad.
Tsy olana velively izany. Ary ny jacks raha ny tena izy dia toa vaovao; tsy ratsy mihitsy ireo. Te-hijery manokana ny tsangan-drivotra ihany koa ianao eto.
Ary ny zavatra tadiavinao dia ny famerenana rehetra azonao atao. Ankehitriny, ny famolavolana bisikileta sasany mankany amin'ny damper dia afaka miondrika mora amin'ny fampiasana azy, ary raha mahavita izany izy ireo dia afaka mahazo sisin-dabo, izay mety hitarika fahasimbana bebe kokoa hatrany. Toy izany koa ankehitriny ho an'ny volombava tena izy.
Ny simba sy ny karazan'akanjo tadiavina dia tadiavinao eo amin'ny tombo-kase wiper lehibe eto ary ny ao anatiny ihany no hifanaraka amin'izay madio sy hijerena azy. Ary avy eo tianao ianao dia jereo ihany koa fa tsara ny kofehy. Misy peratra O any.
Hamarino tsara fa tsara izany. Raha misy antony maty na miharatsy io dia soloina ity. O-peratra fotsiny.
Ary alao antoka fa mihazakazaka ao anatiny ny rantsan-tananao. Ho hitanao izao fa misy tendron'olona roa ao anatiny. Amin'ny ankapobeny dia ny rivotra no mifandimby ny efi-trano tsara sy ratsy.
Fa raha misy zavatra hafa, na karazana fahasimbana hafa, dia mety mila valopy misy valopy vaovao ianao. Koa miambena fotsiny. Amin'ny ankapobeny, zahao tsara ny atiny ary alao antoka fa tsara izany.
Raha tsy azonao antoka ny zavatra rehetra, manontania fotsiny ny fivarotana bisikileta eo an-toerana anao na zahao ireo tranokala Rockshox, FOX, na DVO satria manana faritra fikarakarana matetika izy ireo. Manaraka izany, rehefa hitanao hoe, tokony ho azonao antoka fa madio sy miodina tsara sy milamina ny bearings ao anatin'io mpitroka hatairana io. Raha manana nicks ny bearings na mahatsiaro ho nitifitra fotsiny tamin'ny ankapobeny dia mila soloina ireo.
Tsy olana lehibe amin'ity karazana bisikileta misy rohy ity. Tsy mandeha tsara izany. Saingy amin'ny bisikileta sasany, ohatra, raha manana clevis ianao izay mitondra mivantana ny hatairana, ary tsy misy ny rohy ahafahana manohana an'io, raha ampiana fikorontanana amin'ity teboka ity ianao, na amin'ny faran'ny fahatairana hafa, alao ny tena mpitroka hatairana mihitsy, ary afaka miondrika ilay mpitroka manaitra.
Ary vao tsy ela akory izahay dia nahita sary vitsivitsy momba ny mpitroka hatairana tamin'ny Internet izay nipoitra tampoka teo afovoan'ny zava-drehetra, mba hitazomana ireo zavatra fotsiny. Tsy mila fikolokoloana adala irery izany. Fahaiza-misaina fotsiny.
Hamarino fotsiny fa tsara ny toetran'ny bisikiletanao amin'ny faladiany mahazatra izay mandalo ao. Ka tsara ihany koa ny manamarina fotsiny hoe mihetsika ity ary tsy misy lalao ao. Ampahany mora vidy hosoloina izy ireo, noho izany dia mamporisika anao aho hijery ny hetsika rehetra, handamina sy hanitsy zavatra, okay, tonga izao ny fotoana hanodinana ara-bakiteny ny fomba ary hamerenana azy rehetra.
Avereno indray, alao antoka fotsiny fa averinao ao anaty filaminana marina ny zava-drehetra. m miaraka amin'ny dibera SRAM sasany. Menaka mpitroka manaitra.
Raha ny tena izy dia ho an'ny tombo-kase r ary izany no hanosorana ny tombokase tena izy ireo. A, manampy azy ireo hisosa somary mora kokoa ao anatiny izy io ary mazava ho azy fa manao tombo-kase somary tsara kokoa. Tsy mila adala satria asa tsara be no ataon'izy ireo.
Ary avy eo dia tranga famerenana ny cuff rivotra. Atosiho moramora ilay faran'ny hatairana any, avy eo ianao ary avereno mody. Izao sisa no hataonao dia ny mametaka ny fantson-drivotra.
Ankehitriny dia hitanao fa rehefa miverina amin'ny bisikileta izy io dia ho mora kokoa ny manao azy. Azonao atao izany amin'ny vice. Misy ny fahafaha-manao samihafa.
Ny tiako atao dia ny manao izany eto. Izaho dia hametraka menaka kely kokoa fotsiny amin'ireo kofehy ao mba hahazoana antoka fa mandray tsara izy ireo. Ankehitriny ny tanany dia mila averina miverina amin'ny toerany rehefa manery azy, hahazoana antoka fa milamina sy milamina ireo kofehy.
Ary avy eo dia sintomy mafy fotsiny. Ankehitriny satria ny tanako miasa mavitrika dia matavy be eto, ary toy izany koa ny bodywork, ho vitako ity rehefa eo amin'ny bisikileta fotsiny aho mba hahazoana azy eo amin'ny toerany. Hofeheziko fotsiny izany.
Tsy afaka manenjana intsony amin'ny tanako matavy aho. Fa tonga izao ny fotoana hampitsaharana ny damper indray. Tsara izao ny manakatona ny visy amin'ny kofehy vaovao, satria mety hipoitra izany rehefa mandeha ny fotoana.
Zavatra tsara foana. Ary avy eo dia mitarika fahatairana fotsiny izany. Eny ary, ka any isika no mandeha.
Ny hatairana dia ao anatin'ny sombin-javatra iray ihany. Aza adino, mila antoka fotsiny aho fa mihamafy tsara ilay tanany, fa mbola hataoko amin'ny bisikileta indray satria tanana fahatelo aho, izay mazava ho azy no vovoka mpitroka manaitra indrindra. Hofafako fotsiny amin'ny alikaola isopropyl vitsivitsy aho satria somary nanosotra menaka kely ny fonon-tànako, koa izao no fotoana hanovana ny fonon-tànanao ary esory ireo.
Avy eo ianao dia te-hahazo antoka fa hamory azy io indray ianao. Mametraha threadlocker amin'ireto tadin-tserotra manaitra ireto satria afaka mivoaka izy ireo, indrindra raha te-hihazakazaka amin'ny zaridainan'ny bisikileta ianao, misy fihoaram-pefy maro hafa. Ary avy eo tonga ny fotoana hampiakarana ny fahatairana indray.
Ka andao ary. Izany no famatsian-drivotra fototra. Manantena aho fa hanomboka ao an-trano daholo ianareo.
Azonao atao izany amin'ny damper, FOX, Rockshox sns. Mitovy ny fitsipika. Ary mitohy mandeha tsara.
Araka ny ahitanao ny toetrako mando tena milay sy madio. Ny ambin'ny bisikileta dia mila fifantohana kely kokoa mba ho marin-toetra. Raha mila lahatsoratra vitsivitsy hafa dia tsindrio eto raha hijery toeram-pitsaboana fitondra bisikileta ianao. Tokony ho fantatrao ny fomba hahatonga ny bisikiletanao ho tena mety, ary kitiho eto raha te hanana serivisy amin'ny tongotra ambany ianao raha te hidina lalindalina kokoa nefa eo amin'ny fork eo anoloana.
Ary toy ny mahazatra, raha te-hanamboatra ny bisikiletanao ianao dia omeo ankihibe izahay.
Iza no mampivarahontsana an'i Fox?
Ny hatairan'i FOXdia 'tamin'ny fanompoana'- midika hoe tsirairaydonaazo amboarina amin'ny atiny vaovao, ary azo ampiharina amin'ny vidiny gazy azota vaovao nydona, famelomana aina.
Mitovy amin'ny fampiatoana an'i Fox ve ny akanjo Fox?
ambanin'i Geoffamboahaolo, sy BobFox's FoxfifaninananaShoxorinasa mpamokatra faritra,amboahaoloFactory. Orinasa mitazona,amboahaoloFactory Holding, naorina tamin'ny 1978.amboahaoloFactorymiteraka fampiatoanasinga ho an'ny moto, fiara, fiara manerana ny tany, moto, ary bisikileta an-tendrombohitra.
Ny ankamaroan'ny bisikileta amin'izao fotoana izao dia misy fampiatoana rivotra, forks ary dampers rehefa mihantona tanteraka ary ny zavatra lehibe momba azy ireo dia hoe tena mora ny manitsy azy ireo ary tena mahay mandanjalanja koa. Noho izany, amin'ity lahatsoratra ity, miaraka amin'ny fanampian'ny teknolojia GMBN, matetika izahay dia miresaka momba ny mari-pamantarana tsy misy fotony ka (hostes gurgles) dia ampahafantarinay anao hoe inona izy ireo, ny fomba fiasan'izy ireo, ny fomba fanamboarana ary avy eo hanomezako fampisehoana vitsivitsy momba ny lalana amin'ny fiantraikan'izy ireo amin'ny fampiatoana sy ny fahatsapany eo amin'ilay lalana. (mozika funky) (skid gravel) Nahare mpihazakazaka matihanina aho matetika nilaza fa manampy spacer betsaka kokoa amin'ny fampiatoana azy ireo ary manontany tena aho indraindray raha toa ilay zavatra macho fotsiny io.
Mitaingina bisikileta mafy aho ka mila ny fampiatoako hampitomboana ny entana, sa izany? manjary mafy loatra ilay bisikileta ary tsy mampiasa fampiatoana toa ny tokony ho izy ianao? Mieritreritra aho fa hanomboka amin'ny fitsapana kely indray androany mba hahitako ny fiantraikan'ny mari-pamantarana eo amin'ny saiko sy ny halavany. Ka anio aho eo amin'ny Canyon Strive misy tononkira RockShox 170 mil eo alohany. Tonga amin'ny fenitra miaraka amina volume me spacer da izy ireo.
Manana roa ao aho satria tena salama saina aho. Ka andefasako azy ity amin'ity rano ity. Fitsarana mafy ity ary ho hitantsika amin'ny majika amin'ny fakantsary ny habetsaky ny dia ampiasako. (swooshes nomerika) (crank gear) Ny peratra vita amin'ny fingotra dia mampiseho mitovy betsaka amin'ny azy.
Ka izao dia hatakaloko marika efatra ary ho hitako ny mampitaha azy. Ny zavatra hiezahako dia ny mametraka ilay zavatra mitovy amin'ny drop, fa tsy siansa marina, ity, saingy mety hahaliana. Marina, avereno ilay tsindry mitovy amin'izany, 65 PSI, satria heveriko fa izany no hevitra.
Raha manomboka manamafy ny fork fotsiny ianao fa tsy manampy spacer volume, dia ho very tsy hahatakatra ireo bontsongo kely inoako ianao. Marina ve izany, Doddy? - Misaotra Neil, marina, andao hiresaka momba ny spacer volume. Ireto zavatra plastika kely eto.
Voalohany indrindra, maninona ianao no tehirizina ao anaty siny? Tsotra fotsiny, miaraka amin'ny fork fampiatoana rivotra ianao dia afaka mandanjalanja ny fahatsapana ny fiatoan'ny rivotra. Rehefa mamehy ny rivotra ianao dia lasa mandroso kokoa ary azonao hatsaraina tsikelikely amin'ny alàlan'ny fampidirana ireo habetsahan'ny rivotra. Miankina amin'ny maodelin'ny fork izay anananao, dia misy isa faran'izay betsaka azonao ampidirina ary tena manokana amin'ny fork tsirairay izy ireo.
Ohatra, ireo dia ho an'ny Fox 36, ity ho an'ny Fox 34, ary ireo ho an'ny RockShox Lyrik. Samy hafa kely daholo izy ireo any ivelany any ka mila mahazo antoka ianao fa manana ny mety amin'ny fork anao. Ary mifanaraka tsara amin'ny fahatsapana ilay fork io.
Mahazo fahatsapana somary milamina kokoa ianao. Ity no karazana mitaingina tian'i Henry, tiany ny mampiasa ny dia rehetra ataony mandritra ny fotoana rehetra, ary Blake kosa mametraka ny habetsaky ny habetsaky ny spacers ao anaty fork satria tiany ho henjana tokoa izy io amin'ny faran'ny dia. Ka raha mpitaingin-tsoavaly ianao izay tia mitsambikina goavambe ary mitetika ny zavatra tsy dia mendri-piderana, dia te hanana mpanelanelana habetsahan'ny rivotra ao amin'ny fork ianao.
Ny zavatra lehibe momba azy ireo dia ny tsy fandaniany vola be, tena milay tokoa satria azonao ampanjifaina ny fahatsapana ny fork anao, ary tsotra tanteraka izy ireo. Ny sisa ataonao dia ny mametraka ireo spacer mety amin'ny forks anao, mila pump pump ianao ary mila base, fa ny base no zava-dehibe indrindra. Ity iray ity dia marika socket Fox marika fa tsy mila an'izany akory ianao raha toa ka ny habeny no mety sy manana sisiny fisaka.
Tsy mila iray misy sisiny beveled ianao satria afaka boribory ny visy alimina eo an-tampon'ny fork any mba hahazoana antoka fa mifanaraka tsara izany. Tena zava-dehibe izany. Mahafinaritra sy mora ny mivory, esory ny satroka ambony, esory ny fork ary esory fotsiny ny satroka ambony dia ho hitanao ny toerana ipetrahan'izy ireo.
Manodinkodina mivantana ireo sombim-bato RockShox Bottomless miaraka amin'ny satroka ambony ianao, ary ny Fuchs mamoaka haingana kosa hidina tsara sy mora. Makà fotoana, mitandrema mba tsy hiampita ireo kofehy rehefa napetrakao indray ilay tampony, ary ataovy tery loatra izy io, tsy mila tery hadalana fa tadidio fa ity no tongotra tongotra mba tsy ho afaka ianao ary tsy misy rivotra ialana. (tabataba nomerika) (cranks fehikibo) (flap an'ny bisikileta) - Ie, azo antoka fa tsy dia nandeha loatra, ary tsy nahatsapa ho sarotra izany? Andao hojerentsika ny antony mahatonga ny spacer volume kokoa ho tsara amin'ny fanaovana zavatra lehibe kokoa.
Andao handeha any amin'ny spacer zero, manandrama indray alohan'ny hiverenantsika amin'ilay làlana, dia nanao dia lavitra kokoa aho, tsy dia betsaka kokoa, fa ny fitoviana dia toa nitovy ihany koa, io fotsiny no zava-doza, izaho dia betsaka kokoa ny mpandeha nampiasako spacer, tsy dia be loatra ny dia bebe kokoa spacers, ka misy dikany tanteraka. Tamin'izay fotoana izay indrindra rehefa tonga tany am-pamaranana aho dia tsapako fa mandroso ny lanjany ka mahatsapa aho fa manampy spacer bebe kokoa rehefa manao ireo hira malaza ireo ianao ary tsy tianao, dia ny anao rehetra mandroso ny lanjany. Mety ho tianao ny hijanona kely kokoa amin'ny volanao ny fork, mety ho izany no izy raha mila na mila spacer volume ianao.
Eny ary, hazakazaka telo samy hafa no hataoko. Miverina amin'ny fametahana mahazatra ahy miaraka amina mari-pamantarana roa aho. Mandehana mihazakazaka, jereo ny fihetseham-pony, nandehandeha tamin'ity làlambe maraina ity aho ka fantatro tsara, Fantaro ny fepetra, avy eo dia hapetrako ao anaty spacers efatra ary avy eo manandrana fihazakazahana hafa tsy misy na inona na inona ao, jereo raha mafy na mahazo aina na any amin'ny afovoany no mety indrindra amiko, marina, misambiza kely ny tenanao izao. 'Kay, marina, mitaingina ity lalana ity aho eto.
Tena fohy izy io ka tsy dia haingana aho (miteny haingana) ahafahanao manosika ny tenanao ho mafy be ary misy faritra miorim-paka haingana izay tadiavinao bisikileta ahazoana aina ary avy eo ny zavatra henjana kokoa eo amin'ny faran'ny toerana avo be dia tokony hipetraka ny bisikileta. mandritra ny dia an-tongotra, fa alona, ​​ka horefesiko koa ny lambako, mba hampitahana ahy amin'ny fotoana sy ny fotoana. Marina, mihazakazaha aloha mankany amin'ny fananganana mahazatra ahy. Andao hojerentsika ny fihetseham-pony. (Mozika elektronika) (Neil mimenomenona) Maloto be izao.
Ary avy eo mitsambikina ny sasany. vaky vaky be taloha. Mahatsiaro tena tsara.
Momba ny fakany izao. Fizarana baomba, somary masiaka kely eto. (Bisikileta bisikileta) Mandroso lavitra be any ny lanjany.
Te hijanona aho. Tiako ny hijanona ho kamo ny bisikileta. Tsara be mamaky eo.
Oh! Tsy dia somary (mimonomonona) aho, nokapohiko mafy ilay fork, hanakorontana aho. (Mikorisa ny kodiarana) Andao, ka mihazakazaha aloha miaraka amin'ny toerako fototra, spacer volume roa, hitanao fa tsy dia be ny sisa, efa saika nilatsaka aho, ka izao dia hiakatra amin'ny efatra aho. Heveriko fa miaraka amin'ny spacer zero dia misy ny vintana mety hialako. 'Kay, fehezo roa, miaraka amina spacer volume efatra ankehitriny, saingy adinoko ny nametraka ny solomasoko, andramo indray. (Bipety efijery) fihodinana roa, mari-pamantarana efatra, spacer ambony indrindra.
Marina, faingana izy io. Izay ilay izy, tsapanao fa be dia be ny dia any. Nahatsapa aho fa afaka nitety ireo zorony ireo haingana kokoa.
Eny, mitazona tsara kokoa ny fitsambikinana amin'ny bisikiletako io. (Mikapoka ny bisikileta) Tsara koa izany, nifarana teo afovoany (nimonomonona) tamin'izay, ary nahatsapa ho tsara. (Manosika ny fakan-tsary) Fantatrao izany, tsara hatreto.
Eny, tsara izany. Nahafinaritra koa izany. Izy io dia lalina kokoa ary henjana kokoa, afaka mijanona ao ambadiky ny bisikileta fotsiny aho, mba tsy hilentika be loatra, ary ny fanontaniana dia hoe ohatrinona no hanasatra anao sy eny an-dàlana satria azo antoka izany. (Mozika Elektronika) Azo antoka fa tsy dia lavitra ny dia misy mpandeha efatra mandroso miankavia.
Mahatsiaro tena ho tsara, tsy misy tena dona be amin'ity làlana ity, ka fantatrao fa angamba mendrika hotehirizina ho an'ireo lalan-kaleha ireo, hira ratsy kokoa, henjana kokoa, mafy kokoa. Tena nahatsapa ho tena tsara izany ary mampiseho ny roa segondra haingana kokoa ny famantaranandro, huh, marina. Amin'izao fotoana izao amin'ny spacer zero.
Ireo spacer-n'ny zero, hahasalama kokoa ve? Hiadana ve? Andao hojerentsika, amin'ny fakany. Mahatsiaro ho tsara (bisikileta bisikileta) esory ny zavatra tena sarotra. (Potipotika ny maloto) Mahatsiaro ho somary lavitra lavitra amin'ny bisikileta aho, izay tsy ny g (mumbles) tena mampahazo aina ahy no tsy tiako ny fomba mandeha lavitra be. (mozika elektronika) Eny ary, farany hasehoko ilay fork.
Tsy misy spacer ity mba ho hitanao fa efa nampiasa ny saika rehetra nataoko aho tsy heveriko fa nitifitra ny fanambanin'ny vatolampy aho fa roa na telo tapitrisa hafa. Ka mieritreritra aho fa taorian'ireny hazakazaka ireny dia tena nitovy ny fotoana nifanandrinako, koa tamin'ny fotoana nihazakazahana haingana indrindra, nahagaga, tsara, tsy haiko, sarotra ny milaza, andro lava be io, heveriko fa valo taona aho Nahavita nihazakazaka tamin'ity lalana ity aho ka tena reraka, saingy mbola nahazo hazakazaka tsara ihany aho. Saingy heveriko fa ny tena fahatsapana ho ahy, sa tsy izany? Tsy miova ny géometry ny bisikileta, ka mampiasa spacer bebe kokoa aho.
Oh, ity Jack, nifalifaly tao amin'ny cafe ianao raha mbola nanao ny asa rehetra aho? Nandeha telo aho ka nametraka iray mihoatra ny mahazatra tao anaty sotroiko satria tiako be ny mihazakazaka amin'ny efatra ka nieritreritra ny hahita marimaritra iraisana aho, mora tanterahina, andramo telo noheveriko, azoko atao tsara ny mandatsaka ny press somary ambany ambany toy ny 62 PSI avy amin'ny 65, ka antenao fa tazomy ny sasany amin'ireo vongana kely, fa miakara kely kokoa amin'ny farany. Doddy inona no eritreritrao - Eny, Neil, eny, teboka tsara izany raha ny marina. Noho izany misy fomba roa hanaovana azy io, mety hijanona ao amin'ny fork misy tsindry iray ihany ianao ary avy eo amin'ny fampidirana spacers volume dia midika fa tsy hampiasa ilay faran'ny hub izay tsara ianao, toa ny, save Do it , ampitao, na ho faty amin'ny fotoana ilana fitsambikinana zavatra lehibe ary mila izany ho backup, fa mety hanana fork ihany koa ianao izay tonga voajanahary ary manome fanohanana kely kokoa sy fanerena kely, angamba PSI dimy na dia 10 PSI avy amin'ny fork.
Ho hitanao fa ho somary misimisy kokoa izany amin'ny voalohany, saingy mbola haharitra ihany izany ary tsy handeha amin'ny lalana rehetra alehanao ianao raha kely ny habetsaky ny volanao. - Eny ary, heveriko fa nanapa-kevitra aho fa hanandrana fotsiny. Azoko atao foana ny mametraka tsindry bebe kokoa na mamoaka spacer volume raha tiako.
Angamba izany no zavatra tsara momba azy io, toy ny hoe tsy nitondra kodiarana mitovy mihitsy aho mandritra ny taona, afaka manova ny fampiatoana foana ianao ary milalao miaraka aminy. Mora be izany, tena faly amin'ny nataoko androany. Aza adino ny mijery ny GMBN Tech, ny fantsona YouTube miavaka tanteraka, zavatra an-taonina maro an-taonina maro any, Doddy sy Henry dia manao zavatra goavambe ary aza adino ny manaraka azy ireo amin'ny media sosialy, Instagram mazava ho azy.
Marina, andao handeha. (Mihorakoraka ny paompy)
Fa maninona no lafo be ny fampiatoana an'i Fox?
izy ireo dialafosatria tsara izy ireo. henjana, mateza ary amin'ny fampiharana dia afaka mandeha mandritra ny taona maro nefa tsy manompo.
Mendrika ny vola ve ny fikorontanana Fox?
amboahaoloNy hoemendrika ny voladia subjectif. Tsara ry zareomay ny antontam, tsy isalasalana, fa natao ho an'ny fampisehoana an-dalambe miaraka bisikileta tampoka na haingana. Miavaka izy ireo eo amin'io sehatra io. Raha fiara fitaterana an-dàlana io, dia mety ho tsara kokoa ny fampiasanao azy amin'ny alàlan'ny fampiasana zavatra azo ovaina.
Mendrika ny vola ve ny forkofa Fox?
Ny zavatra Fit dia tsara kokoa amin'ny resaka fampisehoana, fa miakatra ihany koa ny vidiny. Rehefa tonga ny fanontaniana 'Isamboahaolony vidiny ', ny valiny tsotra dia No. Tsotra satria afaka mahazo fampisehoana mitovy amin'izany ianao ary amin'ny tranga maro, fampisehoana tsara kokoa, avy amin'ny marika hafa ho an'ny kely kokoaMoney.
Inona no tsara kokoa Bilstein na Fox?
Miankina amin'nyinonate hiala amin'ny tranofiaranao ianao. Izany dia nilaza fa manantena fiakarana mafy kokoaamboahaoloampitahaina amin'nyBilstein. Ny vatan'ny aluminiumamboahaoloNy fikorontanana 2.0 dia manome tombony samihafa ho an'ny mpivady; lanja maivana kokoa amin'ny ankapobeny, ary indrindra indrindra,tsara kokoafanaparitahana hafanana.
Manana amboahaolo ve i Shimano?
Nivadika ny fifanarahana 30,2 tapitrisa $amboahaoloho mpamatsy ampahany amin'ny bisikileta feno kokoa hamenoana ny fahaizany mampiato.An'i Shimanofampidirana ny rafitra iray-by sy ny vaovaoamboahaoloFihetsiketsehana 36 any an-tendrombohitra no mety hanaitra izany tontolo izany, saingy tsy ho hitantsika izany raha tsy mivoaka ny modely amin'ny taona 2016.09.12.2014
Manana fifaninanana hazakazaka ve ny SRAM?
Tamin'ny 2015,HENATRAniantsoRaceFace, izaydia tomponynataon'i Fox, noho ny fanolorana rojo vy misy endri-pitehirizana rojo tsy misy fahazoan-dàlanaSRAM'spatanty tahaka ny nataon'ny marika hafa.18.12.2019
Inona no ataon'ny Fox Racing?
Fox Racing. Fox dia nitazona ny toerany amin'ny maha mpitarika ny fanavaozana ny indostrian'ny MX amin'ny alàlan'ny famolavolana sy famokarana fitaovam-piadiana sy akanjo ho an'ny mpitaingin-tsoavaly eran'izao tontolo izao.
Karazan'akanjo manao inona ny Fox Racing?
Ny fananganana an'io filozofia famolavolana atleta entin'ny atleta io, ny orinasa dia nanitatra ny asany sy ny vokatra ho MTB, BMX, ary ny famolavolana ny fanavaozana endrika ho fitafiana nentanim-panahy ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy ary ny tanora.
Avy aiza i Loic avy amin'ny Fox Racing?
Loic dia teraka tany atsimon'i Frantsa - French Riviera. Faly foana, mora amin'ny bisikileta, nanomboka nihazakazaka tamin'ny Loza XC, DH ary Fitsapana i Loic. Fiofanana momba ny làlana an-trano malaza toa an'i Peille na Cap d''Ail, dia nanao sonia ny fifanarahana voalohany nataony tamin'ny taona voalohany naha-Junior azy i Loic.